पढ्ने विज्ञान, पुज्ने 'उडुवा घोडा' - Nepal Readers
Home » पढ्ने विज्ञान, पुज्ने ‘उडुवा घोडा’
उसले भन्यो, ‘यो कुकुर होइन, भेरु महाराज हो। मैले एउटा टिभी सिरियलबाट थाहा पाएको। मैले एउटा देउताको तस्वीरमा पनि सँगै कुकुरको चित्र देखेको छु। भगवानलाई कुल्चन पुगेका कारण त्यसप्रति क्षमा मागेको हुँ।’
अघिल्लो सालको कुरा हो, कक्षा १२ मा टप गरेका मेरा मित्रको छोरासँग मेरो कुराकानी भइरहेको थियो। उ आफ्नो कुकुरलाई लिएर कोठामा खेलिरहेको थियो। खेल्ने क्रममा झुक्किएर उ चिप्लियो। त्यस क्रममा किताब र कुकुरलाई समेत कुल्चिन पुग्यो। उसले हत्तपत्त किताबलाई त ढोगेन मात्रै, आफ्नो कान पनि समात्यो। सँगै, कुकुरसँग समेत ‘क्षमा’ माग्यो। मैले उसलाई सोधेँ, ‘यो सबै के गरेको?’
लेखक संजय श्रमण
उसले भन्यो, ‘यो कुकुर होइन, भेरु महाराज हो। मैले एउटा टिभी सिरियलबाट थाहा पाएको। मैले एउटा देउताको तस्वीरमा पनि सँगै कुकुरको चित्र देखेको छु। भगवानलाई कुल्चन पुगेका कारण त्यसप्रति क्षमा मागेको हुँ।’ किताबलाई कुल्चने कुरा राम्रो होइन किनकी त्यसो गर्दा किताब च्यातिन सक्छ। र, पशुप्रति अनादर गर्ने, कुल्चने या लात्ताले हान्ने कुरा पनि खराब कृत्य हो, त्यसो गर्नु हुँदैन। तर यहाँको सन्दर्भ अलग थियो। यहाँ सम्पूर्ण कुरा इश्वरीय रहस्यसँग जोडिएको थियो।
मैले उसको किताबलाई नियालेँ। किताबको बाहिरी कभरमा टाँसिएको नेम चिटमा ‘हावामा उड्ने कुनै देवता’को चित्र देखिन्थ्यो। मैले उसलाई व्यंग्य गर्ने शैलीमा भने, ‘यो कुन जनावरको चित्र हो?’ अप्ठ्यारो मान्दै उसले भन्यो, ‘यो कुनै जीव होइन, यो त भगवानको तस्वीर हो। शक्तिशाली भगवान।’
मैले उसका कुरालाई वेवास्ता गर्दै उसँग गुरुत्वाकर्षणको बारेमा सोधे। उसले गुरुत्वाकर्षणको पूरा नियम एक स्वासमै बाचन गरेर सुनायो। फेरि मैले उसँग पलायन वेग (इस्केप भेलोसिटी) र प्लेनेटरी मोसनका बारेमा पनि सोधेँ। उसले तुरुन्तै त्यससम्बन्धी सिद्धान्त सुनाइदियो। र, विज्ञानका ती सिद्धान्त र सुत्र मलाई सुनाउन पाउँदा उ खुसी देखिन्थ्यो।
मैले फेरि उसलाई सोधेँ, ‘एउटा रकेटलाई उड्नका लागि र जमिनको गुरुत्व क्षेत्रबाट बाहिर जानका लागि कति समय र उर्जा लाग्छ? र, के त्यस्तो उर्जा मान्छे या कुनै जनावरमा हुनसक्छ?’ र, सो प्रश्नमा पनि उसले तथ्यपूर्ण जवाफ दियो र भन्यो, ‘हो, ठूला र हवाइहजाज या रकेटमा मात्रै गुरुत्व बललाई लत्याएर आकाशमा जानसक्छन्। ठूला र शक्तिशाली मेसिनहरू मात्रै गुरुत्व बललाई लत्याएर आकाशमा उड्नसक्छन्।’
मैले फेरि उसलाई सोधेँ, ‘त्यसो हो भने ती उड्नेवाला देवताहरूचाहिँ कसरी आकाशमा उड्थे होला?’ तर मेरो प्रश्न सुनेर उसलाई कुनै आश्चर्य लागेन र सहजतासँग उत्तर दियो, ‘उहाँ त भगवान हो। भगवानले त जे पनि गर्न सक्छन्।’ मैले अन्त्यमा उसलाई सोधेँ, ‘त्यसो भए के प्रकृतिका नियमभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छन् भगवान?’ उसले भन्यो, ‘त्यो त मलाई थाहा छैन। तर भगवानले जे चाहे, त्यही गर्न सक्छन्।’
प्रायजसो भारतका गाउँ र शहरमा कुनै विद्यार्थीले परिक्षामा टप गरेपछि उसका/उनका परिवारले खुसीयाली मनाउँछ लड्डु बाँड्छ।
भोजसमेत खुवाउँछ। विद्यार्थीले कुनै परिक्षामा सफलता प्राप्त गर्ने कुरा राम्रो हो। कडा मेहेनत र लगनशीतापछिमात्रै विद्यार्थी सफल हुन्छन्। र, उनीहरूलाई जस्तो शिक्षा दिइन्छ, त्यसमा धेरै अंक ल्याएर ती ‘सफल’ भएका हुन्छन्। तर, यी विद्यार्थीहरूको सफलताको वास्तविक मूल्य के हो? के यी भविष्यमा गएर तर्कशील र विवेकशील मान्छे बन्लान्? जबकि प्रायजसो यी विद्यार्थीहरूले कहीँ न कहीँ विज्ञान विषय पढेकै हुन्छन्। तर के यी भाइबहिनीलाई यो शिक्षाले वैज्ञानिक ‘चित्त’ र सोच्ने/विचार गर्ने तागत दिन्छ?
दु:खको कुरा, यी टपर विद्यार्थीहरू अक्सर रटाइएका सुगाझैँ हुन्छन्, जसमा मौलिक चिन्तन र विचार हुने गर्दैन। यिनलाई तर्क र प्रश्न होइन, विश्वास गर्न सिकाइन्छ। यसो गरेपछि हाम्रा बालबच्चाहरू ‘पश्चिमा साहेब’ र मालिकहरूका लागि राम्रा खेताला, टेक्निसियन र म्यानेजेर हुनसक्छन्। तर आफैँमा यिनीहरू केही पनि हुन सक्दैनन्, केही गर्न सक्दैनन्। परीक्षाका परिणामलाई लिएर वरपर मनाइएका उत्सवहरू मैले विगत २० वर्षदेखि देखेको छु तर दाविका साथ भन्न सक्छु कि यी टपरहरूमध्ये अधिकांश बच्चालाई भारतका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत बनाउनका लागि भयानक सुगा रटानयुक्त स्पेशल कोचिङ दिलाइन्छ।
यी बच्चाहरूलाई कुनै खास परिक्षामा पास हुनका लागि तयार पारिन्छन्। यिनीहरूमा ज्ञानका प्रति, सिक्ने र बुझ्नेप्रति कति लगाव छ भन्ने कुराको मतलब छैन। यस्ता अधिकांश बच्चाहरू धर्मभीरु, विचारहिन, आलोचनात्मक चेतबाट अन्जान तथा समाज, संस्कृति र धर्मको ज्ञानबाट शुन्य हुन्छन्। यिनीहरूमध्ये अधिकांशलाई प्रतियोगिता–परिक्षाका लागि डिजाइन गरिएको, जाँच केन्द्रित स्पेशल कोचिङमार्फत विज्ञान र गणितहरूका नियमहरू घोटेर पिलाइन्छ। र, पढेर घर फर्कनेबित्तिकै यिनलाई यिनका बाउआमा र समाजले मिथकशास्त्र, पुराना महाकाव्य, र तोतामैनाका कथाहरू पिलाउने गर्छन्। अचेल, टेलिभिजन र युट्युब च्यानलहरूमा पनि यस्तै पूराना उडन्ते कथाहरूको प्रकोप पनि उपलब्ध छँदैछ।
त्यसो हुनाका कारण यी बच्चाहरू केबल मिथक (पूराना काल्पनिक कथाहरू) र महाकाव्यहरूमा श्रद्धा र भक्ति राख्छन्। जब श्रद्धा र भक्ति राखिन्छ, त्यहाँ प्रश्न गरिन्नँ। यिनीहरू यतिमात्रै गर्दैनन्, परिक्षा दिन जाँदासमेत कुनै देउतालाई प्रसाद चढाएर या कुनै जोगी, बाबा या मुल्लाको आर्शिवाद लिएर जान्छन्। यी बच्चाहरू एकतर्फ ग्रयाभिटी, इस्केप भेलोसिटीका नियम र सिद्धान्त रट्छन्, अर्कोतर्फ आकाशमा पहाड बोकेर हिँड्ने तथा आकाशमा गधा चढेर उड्ने देवदूतमा विश्वास गर्छन्। पुजा गर्छन्।
यो एक भयानक खालको सिजोफ्रेनिया हो, जसमा एकै तथ्यका प्रति कैयौँ बिरोधाभासयुक्त जानकारी र विश्वास लिएर हाम्रा बच्चाहरू बाँचिरहेका छन्। र, उनीहरू ज्ञानको कुनै पनि आयाममा कुनै मौलिक कुरा खोज्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। उनीहरू केबल पहिले नै खोजिएका चीजहरूका राम्रा प्रबन्धक अथवा व्यवस्थापक भन्न सक्छन्। तर विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन इत्यादिमा कुनै नयाँ योगदान दिन सक्दैनन्।
यी बच्चाहरूको एउटै उदेश्य हुन्छ कि कुनै पनि तरहले परिक्षा पास गरेर कुनै डिग्री हाँसिल गर्ने र ठूलो कमाइ गर्ने। यिनीहरूलाई अन्य कुरामा कुनै मतलब नै हुन्न। हुनलाई, अधिकांश बच्चाहरू आफ्नो शिसुकालदेखि नै अनेकौँ जटिल विषयहरूमा अनेकौँ प्रश्नहरू उठाउँछन् तर हाम्रो शिक्षा व्यवस्था, हाम्रा परिवारहरूका अन्धविश्वास, कर्मकाण्ड र पुजापाठहरूले बच्चाका जिज्ञासाहरूलाई क्रमस: मार्दै लैजान्छन्।
तपाईँ कल्पना गर्नुस्, जुन परिवारमा पहाडलाई हत्केलामा हालेर उड्ने देवता या आकाशमा गधा चढेर हिँड्ने स्वर्गदुतको पूजा र चर्चा हुन्छ, त्यस घरमा जन्मेको बच्चाले कसरी वर्तमानको गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तमा ‘कुनै कमी’ पहिल्याएर पुरानो सिद्धान्तलाई कसरी चुनौति दिनसक्छ? मन्त्र या प्रार्थनाको शक्तिले बिराट रूप लिएका कुनै अवतारको पुजा गर्दै आएको कुनै विद्यार्थीले कसरी जेनेटिक्स या जीव विज्ञानका स्थापित सिद्धान्तहरूमा रहेका कमीहरू खोज्दै कसरी मौलिक सिद्धान्तहरू प्रस्ताव गर्न सक्ला?
निश्चितै रूपमा, त्यस खालका चिन्तन बोकेका बच्चाहरू त्यस दिशामा जानै सक्दैनन्। त्यो सम्भवै छैन। जो मान्छे आलोचनात्मक चिन्तन बोक्छ, उसले नै परलोकका गन्थनहरूलाई जीवनभर स्वीकार्न सक्दैन। अन्धश्रद्धाका कुरालाई लिएर भावुक बन्दैन। यस कारण, भारतका करोडौँ बच्चाहरू, जो कुनै न कुनै परिक्षामा पास या टप हुने गर्छन्, तिनीहरू मिलेर नै भारत बनेको छ। र, भारत त्यही देश हो, जहाँ मन्त्री, नेता तथा सरकारी अधिकारीहरू समयमा पानी परेन भनेर हवन गराउने र गर्ने गर्छन्।
तिनै बच्चाहरूले यस्तो भारत बनाएका हुन्, जहाँ सीमारक्षाका लागि भन्दै राष्ट्र रक्षा महायज्ञ गरिन्छ। तर राज्यको रक्षाका लागि डिफेन्ससम्बन्धी प्रविधि चाहिँ फ्रान्स तथा इजरायलबाट अर्बौँ तिरेर किनिन्छ। बच्चाहरूलाई यस्तै ब्रेनवास गरिएका कारण आज भारतमा लब जिहादका नाममा धार्मिक निन्दा फैलँदो छ। फरक धर्म अँगालेकै आधारमा सार्वजनिक स्थानमा मान्छेको धुलाई गरिन्छ। आफ्ना बच्चाहरूले स्कुल या कलेजमा टप गर्दा खुसी मनाउँदै गर्दा अभिभावकहरूले यस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनुहोला।
संजय श्रमण–(संजय श्रमण जोठे) मूलत: मध्यप्रदेशका हुन्। इङल्याण्डको ससेक्स यूनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अध्ययनमा स्नातकोत्तर गरेपछि भारतको टाटा इन्स्टीच्यूट अफ सोसल साइन्समा पीएचडी गरिरहेका छन्। बिगत १५ वर्षदेखि विभिन्न शासकीय, गैरशासकीय संस्थाहरू, विश्वविद्यालयहरू एवं कन्सल्टेन्सी एजेन्सिहरूका माध्यमबाट उनी सामाजिक विकासका मुद्दाहरूमा काम गरिरहेका छन्।
मिडियाभिजलबाट नेपाल रिडर्सको अनुवाद।
हाम्रो सम्बन्ध सागरजस्तै गहिरो र सगरमाथाजस्तै उच्च छ (राष्ट्रपति भण्डारी र राष्ट्रपति सीको सम्बोधनकाे पूर्णपाठसहित)
प्रतिगमनविरुद्ध आइतबार : आत्तिएका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिमा गुटको गन्ध